Manchester United oo isha la raaceysa difaac ka tirsan naadiga Juventus – Gool FM
Manchester United oo isha la raaceysa difaac ka tirsan naadiga Juventus
Ahmed Nur July 15, 2021
(Manchester) 15 Luulyo 2021. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa wali baadi goob ugu jirta saxiixa difaac dhexe waxayna haatan xidddigaha bartilmaameedka u ah ku darsatay daafaca naadiga Juventus ee Merih Demiral.
Laacibkan u dhashay dalka Turkiga ayaa horraan lala xiriiriyay kooxaha Premier League ka ciyaara iyadoo ay u gacan haatinayeen naadiyada Arsenal iyo Everton.
Wargeyska Taliyaaniga kasoo baxa ee Gazzetta dello Sport ayaa sheegay inay Red Devils diyaarisay dalab qiimo ahaan gaaraya 45 milyan oo euro isla markaasna u dhiganta 38 milyan oo gini kaasoo ay Bianconeri kaga dooneyso saxiixa Demiral haddii ay ku hungowdo saxiixa Raphael Varane oo bartilmaameedka koowaad u ah.
Si kastaba ha ahaatee, 23-sano jirkan ayaa heysta qandaraas uu ka harsan yahay saddex sano, balse maadaama uusan boos joogto ah ka heysan Allianz Stadium, Man United ayaa dooneysa inay ka faa’ideysato fursad la’aanta xiddigan ka heysa shaxda Juventus.
Paolo Maldini oo xaqiijiyay xilliga ay kooxda AC Milan dhammeystireyso saxiixa Olivier Giroud
Manchester City oo bartilmaameedkeeda u weecisay weeraryahan kale oo tayo badan... (Sidee ayuu saxiixiisa kaga fudud yahay midka Harry Kane?)